Tsindrio 1 Raha Manana Tetibola | Martech Zone
Tsindrio 1 raha manana teti-bola ianao
Alakamisy Oktobra Oktobra 22, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Roa taona lasa izay, tadidiko fa nisy bilaogera naka izany Scoble on. Nanasa an'i Scoble ilay mpitoraka bilaogy hanatrika ny hetsika nataony ary avy eo nibolisatra rehefa nangataka ny fivezivezena i Scoble ary nandoa ny fandaniana. Namaly an-tserasera ihany koa i Scoble, ary nahavita be tamin'izany.
Ity herinandro ity dia herinandro henjana (fa tena mahafinaritra). Manana Toko tokony ho an'ny bokiko aho, mamita tetikasa 2 aho, ary mbola miara-miasa amin'ireo mpanjifa ho avy. Mikasika olona marobe isan-kerinandro aho amin'ny alàlan'ny telefaona, mailaka, Twitter, Facebook, Plaxo… sns, sns. Nokapohina indroa aho tamin'ity herinandro ity ireo mpamaky izay tsy novaliko ary fanantenana iray nohajaiko fa maika ny .
Ny fanantenana no nahatonga ahy - tokony ho nanara-maso akaiky ny orinasa aho. Ny mpamaky kosa dia tantara hafa. Nahazo antso aho hoy ilay Ramatoa,
Fa maninona ianao ry Internet - tsy mamaly telefaona, tsy mamaly mailaka… aza mamaly!
Tsy nifona aho. Fa nilaza ny marina kosa aho. Manana mpitsidika vaovao 20,000 250 isam-bolana farafahakeliny aho ao amin'ny bilaogiko, angamba hevitra 100 (SPAM ny ankamaroany), ary maherin'ny XNUMX ny fangatahana. Na izany aza, ny fangatahana dia tsy fangatahana serivisy. Mpamaky fotsiny izy ireo mitady torohevitra na fampahalalana fanampiny. Miezaka ny mitantana an'ireto aho amin'ny alàlan'ny lahatsoratra bilaogy. Tsy mamaly foana aho. Raha ny marina dia tsy mamaly matetika aho.
Ity misy mailaka izay vao azoko androany momba ny lohahevitra taorian'ny nanoratako ny tambajotranoko ary nangataka ny fanohanan'izy ireo tamin'ny fitsapan-kevitra Top 50 Indiana Blogs:
Nanoratra hafatra marobe tao anatin'ny bilaoginao aho ary nandefa anao tamin'ny DM isan-karazany tao amin'ny Twitter mangataka ny hevitrao, hevitra ary tolo-kevitra momba ny paikady marketing nomerika isan-karazany ary tsy mbola nahazo valiny avy aminao mihitsy aho. Fantatro fa lehilahy be atao ianao, amin'ny fanombohana ny orinasanao vaovao sy ny zava-drehetra, izany no antony tsy netezako mihitsy ny tsy fahafahanao mamaly (na eo aza ny zava-misy Chris Brogan, Beth Harte, Erik Deckers sns dia namaly fanontaniana foana ho ahy).
Mahafinaritra izany fa i Chris, Beth ary Erik dia afaka nanohy nanao toy izao! Nifoha hatramin'ny 3 maraina aho ary namerina nandinika sy namaly ny mailaka fotsiny. Manantena ny torohevitr'i Chris, Beth sy Erik aho momba ny fomba hahatazavako ny isan'ny fangatahana azoko.
Omaly, tao amin'ny kaonferansa isam-paritra aho ary olona 3 no nanodidina ahy… ny iray dia mpiara-miasa amiko, ny iray dia ny mpanazatra ny Sales ahy, ary ny iray mpanjifa. Ilay vazaha mpiara-miasa sy mpivarotra dia nanao vazivazy momba ahy tsy namaly telefaona na mailaka nalefan'izy ireo tamiko. Nijery ny mpanjifako aho ary niteny hoe: "Mamaly ny antso an-tariby sy ny mailakao ve aho?". “Eny,” hoy izy, “… foana… indraindray rehefa misasakalina! Miasa aho fa miasa 24 ora isan'andro ianao. ”
Indraindray aho mino ny tranonkala sy ny olon-kafa toa ahy Chris Anderson dia nanao fanararaotana lehibe ho ahy sy ny orinasako. Ny tompon-trano, ny mpampindram-bola, ny orinasako ary ny mpivarotra dia tsy maimaim-poana. Vokatr'izany dia tsy afaka miasa aho maimaim-poana. Tokony hifantoka amin'ny:
Customers - ireo dia olona mandoa ny vokatrao sy ny serivisiko.
fanantenana - ireo dia orinasa manana teti-bola vonona ho tonga mpanjifa.
Word of Vava Prospects - ireo dia orinasa natolotry ny tambajotra ahy sy ireo mpanjifako izay mahalala fa manana teti-bola ny orinasa iray ary vonona ny ho tonga mpanjifa.
Fangatahana hafa - ireto daholo ny zavatra rehetra… mailaka, fangatahana endrika, antso an-tariby sns ... Matetika ireo latsaka amin'ny lisitra ataoko ireo satria miasa amin'ny 1, 2 ary 3 aho.
Misy fotoana tsy ananako ve noho io fomba io? Angamba - izany no antony ahazoako varotra varotra eto Indianapolis. Tsy manan-kevitra aho. Ny fantatro fotsiny dia ny hoe “fangatahana hafa” dia mety maharitra amam-bolana handinihana sy hamaliana… ary tsy afaka mandany am-bolana aho amin'izany.
Tsy mpanjifa ny mpamaky. Ny mpanjifa aza tsy mpanjifa akory. Toa henjana izany, saingy ny mpamaky sy ny mpanjifa dia tsy mandoa ny famandrihana na ny vaovao avy amin'ity bilaogy ity. Tsy manana fifanarahana eo amin'ny sehatry ny serivisy miaraka amin'ny mpamaky na mpamaky.
Tsy orinasa mahasoa ity bilaogy ity ary tsy milionera amin'ny Internet aho… lavitry izany. Miasa mafy anefa aho mba hahazoana tombony. Raha vantany vao mandoa ny volako rehetra ny bilaogy dia faly aho mipetraka mandritra ny herinandro hamaly ny fangatahan'ny mpamaky sy ny mpamandrika. Mandra-pahatongan'izany… mila mandeha amin'ny serivisy ny mpanjifa.
Raha te-ho mpanjifa ianao dia avereno teneno ny fangatahanao. Nihomehy tamin'ny olona iray aho halina fa mila manova ny mailaka am-piasana aho mba hilazana hoe: "Tsindrio 1 raha manana teti-bola ianao!". Ka… raha mpamaky na mpamandrika ianao ary mitady torohevitra maimaimpoana dia aza tezitra raha tsy mamaly aho. Tena sahirana aho manandrana mandoa vola!
Scale: fitahirizana data ao anaty boaty!
bing + twitter = fikarohana amin'ny fotoana tena izy
22 Okt 2009 amin'ny 3:41 PM
Hevitra tena tsara! Nisy dinika nitovizako tamin'ny mpiara-miasa tamiko omaly momba ny maha-zava-dehibe ny famintinana ary tsy azony fotsiny izany ary nitaraina izy ireo fa tsy averiko haingana ireo mailaka nataony. Nanontaniako azy ny hafaliako mamaly ny mailany ary nanaiky haingana izy. Mila manao laharam-pahamehana ny fifandraisana sy ny fomba fifandraisana ary ny fifangaroan'izy roa isika. Raha izao, raha tsy mahazo valiny manokana momba an'io fanehoankevitra io aho dia… .hahafantatra tsara.
22 Okt 2009 amin'ny 4:15 PM
Misaotra! Raha vantany vao afaka mividy mpandrindra ny bilaogy sy ireo fangatahana ireo aho, dia hanao izany aho! 🙂 Ankasitraho ny fanohanako an'ity, niahiahy aho ny amin'ny famerenenana.
22 Okt 2009 amin'ny 4:17 PM
Ahoana no hataoko mandalo ny valin-teniko amin'ny hevitra tsara toy izany, Nick? Marina ny anao - ny fampitaovana mahomby indrindra dia indraindray MAFY ampiasainay. Tiako ny mandany tontolo andro any amin'ny fivoriana sy amin'ny telefaona, saingy tsy mandoa ny faktiora izany. Ny mailaka dia tena mandaitra amin'ny famonjena fotoana be dia be mandritra ny andro.
22 Okt 2009 amin'ny 4:52 PM
Mieritreritra aho fa mijery ity bilaogy ity ho 'freebie'… ny fidirana ao amin'ny fantsom-pivarotana bilaogera tsirairay avy. Raha tsy mandoko ny sary iray manontolo ny fampahalalana ao amin'ilay tranokala - tiako ny hiara-hiasa amin'ireo mpamaky ahy hampiakatra azy amin'ny dingana manaraka!
22 Okt 2009 amin'ny 4:53 PM
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpanjifanao, Doug, azoko atao ny manamarina fa mikarakara ny mpanjifa amin'ny fotoana ara-potoana ianao. Mahafinaritra fa be dia be ny olona manome lanja ny hevitrao (araka ny tokony ho izy), saingy heveriko fa "mamerina" be dia be ianao miaraka amin'ireo lahatsoratra bilaoginao sarobidy. Rehefa mandoa ny serivisinao ny orinasako dia manantena aho fa hojerena haingana. Tsy ho diso fanaterana velively ianao ary izany no anisan'ny antony hanohizako ny fahazoana manoro hevitra anao. Raha ny fahitan'ny mpanjifa azy dia mandeha ho azy ny laharam-pahamehanao.
22 Okt 2009 amin'ny 3:19 PM
Toa anao mila mandray ahy ho mpanampy anao manokana aho. Na dia hamaly ny olona aza aho fa mety tsy hitondra anao velively ny vola miditra dia mazava ho azy fa mila aloa amin'ny serivisiko aho 🙂 Miaraka amin'ny fahatongavan'ireo haino aman-jery / marketing / dokam-barotra vaovao dia tonga ny fisian'ny torohevitra sy serivisy maimaimpoana. Holazaiko ihany anefa izany. Raha mahazo karazana fahitana na fahalalana mifototra amin'ny hevitra na mailaka ianao dia antenaiko fa hamaly an'io olona io ianao. Fantatro fa namaly ny sasany tamin'ny bilaogiko taloha ianao, ka fantatro fa mihaino ianao ary mamaly raha azo atao. Teboka tsara manodidina.
22 Okt 2009 amin'ny 4:22 PM
Doug Efa hitako ny freebies ampy natao tamin'ity haino aman-jery ity mba hahatakarana ny gripeo ka tsy hihemotra eto. Tsy haiko hoe ahoana no mety hanomezan'ny olona tsiny anao mandoa ny faktiora. Ireo olona ireo ihany no tezitra amin'ny U2 ​​amin'ny fivarotana amin'ny fivarotana ny zon'ny hirany amin'ny orinasa sns.
Oct 25, 2009 amin'ny 12: 39 AM
Misaotra Bo! Mpanjifa mahafinaritra ianao. Tiako ny zava-misy fa mandany fotoana foana ianao hamaliana rehefa miteny toy izao aho.
Oct 25, 2009 amin'ny 12: 43 AM
Ka manao fanararaotana kely amin'ny mpamaky an'ity bilaogy ity aho izay nanome ahy atiny maimaimpoana tato anatin'ny 4 taona? Marina?
Azo antoka fa mpamokatra lohalaharana ny bilaogiko saingy miaraka amin'ireo mpitsidika 30,000 isam-bolana, ahoana no hanoloranao hevitra ahy hitantana ny fifandraisako amin'ireo tsirairay manatratra izany? Tokony hampiasa rafitra teboka ve aho? Inona ny fomba fiasa? Inona ilay bala majika?
Manantena ny handre ny fomba hanaovana izany.
26 Okt 2009 amin'ny 10:35 PM
Raha mba nisy fotoana malalaka an'i Doug!
27 Okt 2009 amin'ny 12:50 PM
Ny zavatra iray tsy hitanao dia mahafinaritra anao tokoa ny maneso .. Misavoritaka foana ianao rehefa manome anao fotoan-tsarotra ny namanao ..
Matokia fa tiako ity lahatsoratra ity. Rehefa ao amin'ny orinasa iray izay tsy azo zahana indrindra ianao dia toa tsapan'ny olona fa tsara ny mangataka fanampiana maimaimpoana ary matetika malala-tanana amin'ny fizarana ianao. Ny fikafika dia ny mianatra rehefa miteny, faly aho mamaly izany amin'ny fivoriana lava kokoa. Ny sarany amin'izany dia…
22 Jan 2013 amin'ny 5:29 PM
Nandeha ianao izao nanao Doug! Nanoratra lahatsoratra mahafinaritra hafa ianao. Midera anao am-pahatsorana aho amin'ny fahaizanao manatanteraka ny zavatra rehetra vitanao. Fantatro fa iray amin'ireo nangataka fahazoan-dàlana tamin'ny fotoananao aho indraindray ary niomehy taminao fa sarotra ny mahazo azy. Saingy heveriko ihany koa (antenaina) fa mandanjalanja aho fa ny fahalalana ny fotoananao dia sarobidy ary tsy miady aminao momba izany na mitazona lolompo raha tsy miverina amiko ianao. Imbetsaka aho no nahita ny tsy fahampian'ny valiny ary ny hafa kosa nanery ahy handavaka lalina kokoa ary hametaka ny lohako amin'ny rindrina imbetsaka mandra-pahatongako zavatra ho ahy ary fahatsapana lehibe izany.
Izaho sy ianao dia manana fandaharam-potoana sy fangatahana napetraka amintsika mitovy amin'izany. Miezaka manampy betsaka araka izay azoko atao amin'ny olona mangataka aho, saingy tonga saina aho fa ny iray amin'ireo fitaovana fitantanana fotoana mety indrindra mety ho azoko eo am-pelatanako dia ny fampiasana bebe kokoa ilay teny misy litera roa, "Tsia" .
Manantena aho fa hahita ny fifandanjana amin'ny zavatra rehetra ary manomboka miteny hoe: "Tsy afaka amin'izao fotoana izao aho, fa avelao aho hitory olona iray izay mety ho afaka ho anao."
22 Jan 2013 amin'ny 6:00 PM
Tsia “antenaina” @jasonbean: disqus - zava-dehibe amiko ny fiaraha-miasa naoriko ao amin'ny faritra. Tambajotra fanohanana mitatra izay ianteherako ary antenaiko ny 'hamerina azy' matetika! Ao ianao!
22 Jan 2013 amin'ny 6:16 PM
Ary ny mifamadika amin'izany tompoko! Vice versa! Fotoana izao ho an'ny fotoam-pivarotanay isam-bolana ao amin'ny St. Arbucks izay toa tsy nitranga fa isan-taona! =)